Naya Bikalpa | नेपाली महिलाले राजनीतिमा पनि आधा आकाश ओगट्नुपर्छ ः प्रकाशमान सिंह - Naya Bikalpa नेपाली महिलाले राजनीतिमा पनि आधा आकाश ओगट्नुपर्छ ः प्रकाशमान सिंह - Naya Bikalpa
नेपाली महिलाले राजनीतिमा पनि आधा आकाश ओगट्नुपर्छ ः प्रकाशमान सिंह
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण २८, ०८: ५०: १३
नेपालका महिलाहरुलाई एकत्रित गर्दै महिला दिदिबहिनीहरुका हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि २००४ सालमा स्थापना भएको नेपाल महिला संघ, आज देशैभर ठूलो सञ्जालको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपाल महिला संघको ७१औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा तमाम् महिला दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्न गर्दछु ।
नेपाल महिला संघको ७१औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा नेपाल महिला संघको स्थापना गर्ने मंगलादेवी सिंहले गर्नुभएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कुराहरु यहाँहरु सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । नेपाल महिला संघ २००४ सालमा स्थापना हुँदाखेरी हामी सबैले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने २००७ को जनक्रान्ति कांग्रेसले सफल पार्नुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस २००३ सालमा स्थापना भएको पार्टी हो । त्यसको लगत्तै १ वर्षपछि नेपाल महिला संघ २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहकै नेतृत्वमा स्थापना भएको हो ।
मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरी नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन मात्र नभइकन नेपाल महिला संघको स्थापना कालदेखिनै मंगलादेवी सिंहले उठाउँदै आउनुभएका तमाम् मुद्दाहरु अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । त्यसैले अहिलेको समयलाई सुहाउँदो किसिमले यी मुद्दाहरुलाई के–कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्ने हो त्यो परिमार्जन गरेर नेपाली महिलाहरुको समग्र व्यतिmत्वको विकास गर्नको लागि महिलाहरुको समग्र उत्थानको लागि विशेष गरी नेपाल महिला संघले आफ्नो संगठनलाई केन्द्रीत गर्नुुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाल महिला संघको आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राणाहरुको जहाँनिया शासनलाई समाप्त गर्नको लागि जसरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो; त्यसैगरी नेपाल महिला संघले पनि हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिँदै काँधमा काँध मिलाउँदै आएको छ ।
देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि नेपालका तमाम् दिदिबहिनीहरुको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुन्न । नेपाल महिला संघको ७१औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म मंगलादेवी सिंहलगायत शैलजा आचार्यदेखि नोना कोइराजा, दिव्य कोइराला लगायत सबै महिला नेतृहरुलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । ती सपूत महिलाहरुले देशका कुना–कुनाबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका कारण आज नेपाल महिला संघ यहाँसम्म आइपुगेको इतिहास हामीसामू छ ।
म आदरणीय ती अग्रज महिलाहरुलाई सम्मानपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यतिखेर नेपाल महिला संघ सबैभन्दा बढि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले संसदमा विभिन्न कानुनहरु निर्माण गर्ने क्रम भइरहेको बेला वर्तमान संविधानबाट बन्ने ऐन कानूनहरुमा नेपाली महिला नेतृहरुले विशेष चनाखो भएर संसद्मा आवाज उठाउन पनि म अनुरोध गर्दछु ।
तत्कालिन कांग्रेसका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम संविधानसभाबाट कम्युनिष्टहरुका कारण जारी गर्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानपछि २०७२ असोजमा नयाँ संविधान ल्याउन हामी सफल भयौं । त्यो संविधानमा भएका अधिकारहरु विशेषगरी मौलिक अधिकारदेखि लिएर महिलाहरुसँग सम्बन्धित अधिकारहरु जे–जति छन् त्यसमा उल्लेखित विभिन्न धारा, उपधाराहरुमा र दफाहरुमा महिला संघले राम्रोसँग अध्ययन गरेर केही कमी–कमजोरीहरु छन् भने कुनै धाराहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर संसदमा लैजानुपर्दछ ।
अहिले संविधान अनुसार ऐन, कानुन धमाधम बन्दै छ । त्यसमा हामी सबैजना चनाखो हुनुपर्नेछ । कुनै ऐनमा संशोधन हुँदैछ भने कुनै नयाँ ऐन संविधानको धारा अनुसारको ऐन बन्दैछ संसदमा÷नेपाल महिला संघले त्यसमा अझै चासो दिएर हेर्नुप¥यो । नेपाल महिला संघको केन्द्रीय स्तरको नेतादेखि लिएर जिल्लास्तरसम्मका नेताहरु चनाखो भएर लाग्न म अनुरोध गर्दछु ।
महिलाहरुको हक, अधिकारका कुरा मात्रै गरेर भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि कहाँ कमि–कमजोरी भइरहेको छ ? नयाँ संविधानमा कुन धारामा ऐन बन्दाखेरी कहाँ त्यसमा तलमाथि भइरहेको छ ? त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरामा तपाईहरुले आफ्नो आवाज उठाउनु भयो भने संसदमा त्यसबारे छलफल हुन सक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा संसदमा पेश भएको विधयेक मध्ये आमाको नाममा बच्चाको जन्म दर्ता दिने प्रावधान त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । फेरी गृहमन्त्रालयले नागरिकताको जुन ऐन छ, त्यसमा संशोधन गर्न लागेकोले त्यो विधेयकमा पिताको नाम स्पष्ट नभएको खण्डमा पुष्टि गरेर मात्र नागरिकता दिने छ भनेर भनेको कारण विवादित छ ।
अहिले यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भ गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा समन्वयकारीको भूमिका न्यून रहँदै आएको छ । सरकारले समन्वयकारी भूमिका पटक्कै गरिरहेको छैन । सरकार नै अलमलमा भएका कारण एक दिन अगाडी गृहमन्त्रालयले संसदमा विधेयक लैजानु त्यसको भोलीपल्ट स्वास्थ मन्त्रालयले त्यही सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नुको मतलब यो सरकारले कुनै पनि कुरामा गम्भीरता लिएको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जुन सरकार छ संविधानले दिएको अधिकारहरुलाई समेत आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा हुने कुरामा पनि संविधान अनुसार भइरहेको छैन । त्यसैले त्यही अनुसारको कानुन बनाउन यो सरकारको गम्भीरतामा कमि–कमजोरी देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले लगेको विधेयकहरुमा जुन कुराहरु आइरहेका छन्, त्यसबाट यो सरकार समन्वयात्मक भूमिकाबाट मन्त्रालय चलाउन नसकेको कुरा प्रमाणित हुन्छ । तर्सथ नेपाल महिला संघको इतिहासको कुरा र सिद्धान्तको कुरा नयाँ पिंढीलाई जानकारी गराउनु पनि हो ।
तपार्इंं तमाम् महिला संघमा आबद्ध नेतृहरुले पुरानालाई सम्मान, नयाँलाई जागरण गराउन सके मात्र संगठन सधैंभरी बलियो भइरहन्छ । अहिलेको जमाना भनेको इतिहासको कुरा गरेर मात्र नयाँ पिढिले त्यसलाई विश्वास गर्न कठिन हुन्छ । आधुनिक जमाना अनुसार समाजमा अहिलेको महिलाहरुलाई के समस्याले पिरोलिरहेको छ, त्यो कुरा नेपाल महिला संघले पहिचान गरेर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । यदी त्यो कुरा सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने नेपाल महिला संघको इतिहास राम्रो भइकन पनि अहिलेको महिलाहरुसम्म पुग्न कठिन हुन्छ । त्यसैले समय अनुसार नेपाल महिला संघले महिलाहरुको मुद्दालाई पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुमा नै उचित हुन्छ । संघ कमजोर हुँदै गएमा नेपाल महिला संघमा आबद्ध महिलाहरु अर्कोतिर लाग्न सक्छन् ।
अनि संगठन मजबुत हुन सक्दैन । त्यसैले जल्दाबल्दा समस्याहरुसँगै नेपाली गृहिणीहरुको समस्या के छन् ? काम नपाएका महिलाहरुका के कति छन् ? काम गरेर खाने महिलाहरुको समस्या कस्तो छ ? साधारण लेखपढदेखि उच्च शिक्षा पढिरहेका महिलाको समस्या नै किन नहोस् ति सबै कुराहरु नेपाल महिला संघले सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल महिला संघको तल्लो निकाय वडा÷वडा, टोल÷टोेल हुँदै क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म गएर आन्तरिक छलफलमा जुट्नुपर्छ ।
यसरी जुट्दा समस्याको चूरो पत्ता लाग्न सक्छ । त्यही समस्या बोकेर नेपाली कांग्रेसलाई मार्गदर्शनको रुपमा पठाउनुपर्छ । त्यसरी महिला संघले गाउँगाउँ, घरघरमा गएर गरेको अन्तरक्रिया, छलफलबाट निस्केको निक्र्याैललाई पार्टीले अगाडि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र नेपाल महिला संघको उद्देश्य पूरा हुनसक्छ ।
(उक्त कुरा नेपाल महिला संघको ७१औं स्थापना दिवस तथा नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीजको अवसरमा नेपाल महिला संघ काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा राखिएको विचारमा आधारित ।)
२०७५ श्रावण २८, ०८: ५०: १३